Igbe igbe ahaziri onwe ya nke China N'ogbe nke na -efe efe 25mm Mink nku anya ụlọ ọrụ na ndị na -emepụta ihe | Weiti
Igbe igbe ahaziri onwe ya nke ukwuu 25mm nku anya mink
1, ụdị HELENA 25mm obi ọjọọ n'efu mink lashes
2, Hazie ụdị adịghị mma na ngwugwu ntutu anya dị
3, Super eke & dị fechaa
4, lashes na -adighi ogologo
25MM LASHES LASHES
Ọnụahịa ụlọ ọrụ ozugbo
100% ajị anụ mink na -enweghị obi ọjọọ
Akwa mma na ọnụahịa asọmpi
Karịrị 200000 ụzọ abụọ
Nhazi usoro zuru oke iji dobe ngwa ngwa
Hazie ụdị adịghị mma na ngwugwu ntutu anya dị
Enweghị obi ọjọọ na enweghị ọgwụgwọ, nke enwetara site na iji nwayọọ na-ehicha anụmanụ dị ndụ, na-emerụghị ha ahụ.
Made Ejiri aka mee, ahaziri ya & nku anya mink pụrụ iche.
Natural Super eke & dị fechaa.
√ Ịkwụghị ogologo oge na -adigide.
Tinye nku anya ozugbo nwere nku anya 100% mink.
Application Ngwa dị mfe & mgbanwe.
Ụdị nhọrọ nkuchi anya ngwaahịa dị njikere
Igbe ntutu na okwu ntutu anya niile dị maka ịhazi akara onwe gị na mbipụta 3D UV. Maka ngwugwu lashes ndị ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Gbasaa gluu na eriri na -adịghị mma site na iji swab + mmanụ na -asachapụ (ihe na -ewepụ ihe etemeete n'efu).
Atụmatụ: Chere obere sekọnd ka gluu gbazee.
Beepụ anya nku anya ụgha gị nke ọma, malite na akuku mpụta. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị na-eguzogide, tọpụ gluu ahụ tupu ị gaa n'ihu site na ịtinye Q-n'ọnụ na ihe na-ewepụ ihe etemeete na-abụghị mmanụ ma tinye ya n'akụkụ otu ebe ị na-agbasi mbọ ike ịtọpụ ya.
Jiri swab + mmanụ na -ehicha ihe (wepụ ihe etemeete n'efu) wee tinye ya na ebe nchekwa dị ọcha. Cheta ka ị ghara ịmị lashes gị mgbe ọ bụla! Ha nwere ike were obere mmiri, mana emikpula ha. Ọ bụrụ na lashes gị erie oke mmiri, ha nwere ike bido nwewe udi ha.
Nke gara aga: Aha nkeonwe ụgha igbe mkpọchi nku anya N'ogbe 25mm 100% nku anya mink
Osote: Nkwa nkuchi anya omenala siri ike ejiri aka mee 25mm 3d mink eyelash
25 Mm 3d Mink ntutu anya
Onye na -ere ntutu ntutu 25mm Mink
3d Mink nku anya onye na -ere ahịa
Mink nku anya ụgha
Nnukwu olu warara nku anya 100% mink thic ...
China Factory nnukwu 3d Eye lashes N'ogbe 25mm ...
Nnukwu Wispy fluffy warara lashes 25mm Real mink E ...
Mbipụta na Logo gị N'ogbe Mink lashes 5 ...
Mgbatị ntutu anya, Ndị na -ere ntutu anya, Anya anya, egbugbere ọnụ, mink lashes, eyeliner,